Zvingave zvine musoro here kuva neApple chiitiko muna Gumiguru? | Ndinobva mac
Zvingave zvine musoro here kuva neApple chiitiko muna Gumiguru?
Javier Porcar | | Rumo
Kune vateveri vazhinji kutenderedza nyika yeApple, mharidzo yevhiki rapfuura yakazadzisa zvavaitarisira., nekuve nemhando dzakasiyana siyana dzePhones, uye nekuzvimisikidza seyakanakisa smartphone pamusika. Uye zvakare, kuratidzwa kweApple Watch Series 4 kunopa mhepo nyowani uye yazvino kuApple Watch.
Pane kudaro, kune vamwe vakaravira zvishoma, sezvo vaitarisira kuvhurwa kwezvimwe zvigadzirwa kubva kuApple renji, kunge iPad Pro ine noch, nyowani MacBooks, uye pamwe yakamirirwa-refu Mac mini makeover. Tichava nehurukuro muna Gumiguru kuti itiratidze idzi dzese nhau, kusvikira zvino muchivande?
Chokwadi ndechekuti Apple ndeimwe yemakambani anotamba zvakanyanya netarisiro dzevashandisi vayo, zvekuti zvinoita sekunge kuburitswa kwakanyatso kudiwa neApple. Apple pamwe haigone kuburitsa zvese izvi zvigadzirwa panguva imwe chete. Kana iyo Apple fekitori iri muAsia, zvigadzirwa zvakaita seiyo iPhone kana iyo Apple Watch yatove inotora chikamu chakakura cheiyo nzira dzekutakura dzinoita kutumira kwezvinhu.
Uyezve, sezvo chero kambani, inoda kugadzirisa mwaka kutengesa. Ndokunge, zvirinani kutengesa akawanda iPhone neApple Watch munaGunyana naGumiguru, kupfuudza kutengeswa kweMacs kusvika munaNovember naDecember, kushandisa mukana wekutengesa kweKisimusi. Chii chimwe, Mune chaiyo kesi yeSpain, iyo HomePod inoenderera ichitengeswa muna Gumiguru, iyo inogona kudurura homwe dzedu zvakare.
Kana zviri izvo zvatinoona, Ming-Chi Kuo, uyo akatipa ruzivo rweiyo iPhone, akaenderera mberi nekuvandudzwa kweiyo renji MacBook Air. Zvimwe a Yakachipa kupinda MacBook kupfuura renji razvino, kana MacBooks nyowani nema processor matsva.
Kuburitswa kwe Mac Mini, inofungidzira kuti Apple izadzise izwi rayo kuti irione sechikwata mumutsara wayo wechigadzirwa. Vazhinji vashandisi vane mashoma ekuda muzuva ravo zuva nezuva, vanogona kuwana muMac mini chishandiso chakaringana kuti ubatanidze kune imwe kamuri kana hofisi diki uye shandisa terevhizheni seyeti. Uye pakupedzisira, Apple yakataura pane imwe nguva imwe:
inokosha yekukwiridzira kuMac kuratidza kuratidza.
Pamwe Apple nyeredzi chigadzirwa cheKisimusi ino iMac ine 4k kana 5k resolution. Iyi inogona kuve nzvimbo yekutanga yeMac Pro yatinozoona gore rinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Zvingave zvine musoro here kuva neApple chiitiko muna Gumiguru?
Iyo Apple Watch Series 4 inogona kunge iri "shanduko" maererano naJony Ive
Kanganwa nezvevateereri paunenge uchitsvaga neKa-Block